अर्थतन्त्र Archives - Page 101 of 164 - Purbeli News
सुनकाे भाउ प्रतिताेला २ सयले बढयाे : अाजकाे मुल्य कति ?
काठमाडौं । आज पनि नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुन प्रतितोला २ सय रुपैयाँ बढेको छ भने चाँदी पाँच रुपैया बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ५६ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सुन ५६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज चाँदी ७ सय ६५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो सात सय ६० रुपैया...
यस्ताे छ अाज चाँदीको मूल्य ?
काठमाडौं / आज पनि नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुन प्रतितोला २ सय रुपैयाँ बढेको छ भने चाँदी पाँच रुपैया बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ५६ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सुन ५६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज चाँदी ७ सय ६५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो सात सय ६० रुपैयाँ ...
तरकारीको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि
विराटनगर / चाडपर्वसँगै विराटनगर बजारमा तरकारीको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि भएको छ । विराटनगर बजारमा खपत हुने अधिकांश तरकारी मोरङको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रका साथै सुनसरीको देवानगञ्जबाट आउने गर्दछ तर उक्त क्षेत्रमा भदौ महिनामा आएको बाढीले खेती डुबानमा परेपछि तरकारीको उत्पादनमा कमी भई यसको मूल्यमा वृद्धि भएको हो । कम उत्पादनका कारण उपभोक्ता दोब्बर मूल्...
यस्ताे छ अाजकाे सुनचाँदी भाउ
काठमाडौं / साताको पहिलो दिन आज सुनको भाउ बढेको छ । आज प्रतितोला सुन चार सय रुपैयाले बढेको हो । आज सुन प्रतितोला ५६ हजार मूल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार सुनको मूलय ५५ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ७ सय ६० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदीको मू...
रसुवा / नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सामान आयातका लागि ट्रक।कन्टेनर धमाधम केरुङ जान थालेका छन् । बडादशैँयता ३६८ वटा ट्रक।कन्टेनर केरुङका लागि प्रस्थान गरिसकेको र १०५ वटा ट्रक।कन्टेनर भने मितेरी पुलबाट केरुङ जाने प्रक्रियामा रहेको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश वाग्लेले बताउनुभयो । साँघुरो सडक भएका कारण...
तेह्रथुम / भैँसी पालेर दूध, घ्यु र पाडापाडी बेच्दा राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्दा अनौठो नहोला । तर यहाँका केही किसानले भने राँगो पालेरै भैँसीबाट भन्दा धेरै आम्दानी लिइरहेका छन् । बीउका लागि ल्याएका उन्नत जातका राँगो पाल्ने यहाँका किसानले भैँसीलार्ई बीऊका लागि बहालमा सेवा दिएरै वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ कमाउने गरेका हुन् । पहाडी जिल्लाका लेकाली ग...
काठमाडौं / साताको अन्तिम दिन नेपाली बजारमा पहेँलो धातु सुनको मूल्य घटेको छ । हिजोको भन्दा सुन आज प्रतितोला चार सय रुपैयाँ घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ५५ हजार ६ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ५६ हजार रुपैयाँ थियो । चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । आज पनि चाँदी प्रतितोला ७ सय ५० रुपैयाँमा...
यस्ताेछ अजकाे सुनचाँदी मुल्य
काठमाडौं / बिहिबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा कुनै घटबढ भएको छैन् । आज सुन हिजोकै मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । आज सुन प्रतितोला ५६ हजार मूल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज चाँदीको मूल्य भने पाँच रुपैया घटेको छ । चाँदी प्रतितोला सात सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
ब्यापारीकै मोलमा अलैची बिक्री गर्न बाध्य बन्दै कृषक
तेह्रथुम / लामो समय देखी मुल्यमा गिरावत आएको अलैची यतीबेला कृषकहरु ब्यापारीहरुकै मोलमा बिक्री गर्न बाध्य बनेका छन ।चाडबाड नजिकिए सँगै घर खर्चमा समस्य भए पछि कृषकहरुले उत्पादन गरको अलैची ब्यापारीकै मोलमा बेच्न बाध्य बनेका हुन । राम्रो दाम पाउने आशमा रहेका कृषकहरुले चाडबाड भित्री सक्दा पनि दाम नपाए पछि ब्यापारीकै मोलमा बिक्री गर्न बाध्य बनेको छथर गाँ...
उदयपुरको गैंडा सिमेन्टको कवाडी विक्री नगर्दा ४ करोड भन्दाबढी घाटा (तस्विरहरू सहित)
उदयपुर / निजी उद्योगका भए काम नलाग्ने कवाडी मेशनरी सामान तत्काल लिलाम प्रक्रिया पु‍र्याएर बिक्री गरी उद्योगले आम्दामी गरिसक्थ्यो । तर, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गैंडा छाप सिमेन्टले करोडौंका कवाडी सामान तत्कालन लिलाम गरेर आम्दानी लिन नसक्दा उद्योगलाई करोडौ घाटा लागेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका पुराना कवाडीमा जा...